သာစွကမ်းသာယာ Kan Thar Yar Beach | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သာစွကမ်းသာယာ Kan Thar Yar Beach
သာစွကမ်းသာယာ Kan Thar Yar Beach
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on May 2, 2014 in Creative Writing, Photography, Travel | 21 comments
အနောက်ရိုးမရဲ့ စိတ်ပျက်စရာပျက်သုန်းနေမှုတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး…..
ဂွမြို့လေးကိုကျော်ဖြတ်လာတော့ ညနေ ၅ နာရီခွဲလောက်ရှိပါပြီ…
နာရီဝက်လောက်ဆက်မောင်းလိုက်တော့ ကားလမ်းဘေး တလျှောက်မှာ…ကိုထူးဆန်းပြောသလို
ပြာလဲ့နေတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ရုတ်တရက် ဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်..
လှိုင်းတွေတ၀ုန်းဝုန်း ထနေတဲ့ ပင်လယ်ပြင်နဲ့အပြိုင်လမ်းအတိုင်း ဆက်မောင်းလာတော့
ကားခဏရပ်ပြီး ပင်လယ်လေတ၀ရှုရင်း သဘာဝ ရှုခင်းအလှကို ခံစားကြပါတယ်…
အဲဒီတော့မှ ရိုးမတောင်တွေပေါ်မှာ တစ်လမ်းလုံးတွေ့လာခဲ့တဲ့
ကမ်းသာယာရောက်တော့ ညနေ၆ နာရီခွဲပါပြီ…လူသူတိတ်ဆိပ် ချောက်ကပ်နေတဲ့ ရွာလေးပါပဲ
ငပလီဖက်သွားတဲ့ ကားတွေသာ တခါတရံဖြတ်သွားတတ်တာပါ
လည်ဖို့လည်းအချိန်မရှိတော့ တည်းခိုဖို့နေရာ လိုက်ရှာကြပါတယ်…
လူသူကင်းမဲ့ပြီး အဆောက်အဦးတွေလည်း ပျက်စီးယိုယွင်းနေပါပြီ
နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီကမ်းသာယာဟိုတယ်ပျက်ကြီးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က
“စကားဝါ” ဆိုတဲ့ တည်းခိုခန်း လေးမှာပဲ စတည်းချဖို့စီစဉ်ရပါတယ်…
ကမ်းသာယာ အနီးတ၀ိုက်တော့ အဲဒီတည်းခိုခန်း တစ်ခုပဲရှိပါတယ်..
ညနေ ၆ နာရီခွဲကနေ ည ၉ နာရီအထိ ပုဂ္ဂလိက မီးစက်က နေ၀ယ်သုံးရပါတယ်…
တည်းခိုခန်း ခကတော့ တစ်ယောက်မှ ၄၀၀၀ ကျပ်ပါ..တည်းခိုခမ်းနေရရပြီးတော့
ညစာအတွက် သူနဲ့မနီးမဝေးက စားသောက်ဆိုင်လေးကို ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
သူငယ်ချင်းအမြဲ စားနေကျဆိုင်ဆိုတော့ ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုကြပါတယ်…
အဲ့ ဆိုင်မှာပဲ ရေမိုးချိုးကြပြီး ညစာအတွက် ကျောက်ပုဇွန်ဟင်း၊ ပင်လယ်ငါးပေါင်း
နဲ့ ရခိုင်ရိုးရာ ဟင်းရည်သောက် မှာစားလိုက်ကြပါတယ်…..
ငါးရော ပုဇွန်ရောလတ်ဆတ်လို့ တော်တော်အရသာတွေ့မိပါတယ်…
ဈေးလည်းမကြီးပါဘူး…တစ်ထွာလောက်ရှိတဲ့ ကျောက်ပုဇွန် သုံးကောင်ပါတဲ့
တစ်ပွဲမှ ၈၀၀၀ ပါ…သွားရည်ကျလိုက်ကြပါအုံး…
ညအိပ်တော့လည်း ပင်လယ်လေလေးရှိတော့ သိပ်မအိုက်လှပါဘူး…
အဲ..ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ ခြင်တစ်ကောင်မှ မရှိတာပဲ…
ခြင်ထောင်ပေးထားပေမဲ့ ကျုပ်တို့ ဒီတိုင်းအိပ်လိုက်ကြတာပဲ….
မနက်စောစောထတော့ အဲ့တည်းခိုခန်းနဲ့တွဲရက် စားသောက်ဆိုင်မှာပဲ
ထမင်းကြော် နဲ့ လဘက်ရည်သောက်ကြပြီး သူငယ်ချင်း ခြံဝယ်ထားတဲ့
ကမ်းသာယာကနေ ၇ မိုင်လောက်အကွာက ကမ်းခြေတံငါရွာလေးကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်…
အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာ စခန်းချပြီး ပင်လယ်ကမ်းခြေအလှခံစားကြပါတယ်…
ရွာကလူတွေအများစုဟာ ရိုးသားကြပြီး သူခိုး၊ ဓါးပြ မရှိဘူးလို့လည်း
အဲဒီ နေရာတွေက လူအရောက်နဲ သေးတော့ သဘာဝ အရှိအတိုင်ခြေရာလက်ရာ မပျက်မြင်နိုင်သေးတယ်..
အဲ့ ခရုတွေက အရှင်တွေ…ခွါစားလို့ရတယ်ပြောပါတယ်…သူတို့တော့ ခွါပြီးအစိမ်းစားတယ်လို့ပြောတာပဲ..
သင်္ကြန်တွင်း နားနေတဲ့ ငါးဖမ်းလှေတွေ
တောက်လျှောက်ပျက်နေတဲ့ အိမ်သာနက် ခုနကမှ ကွန်နက်ရှင်လေးထကောင်းလို့ ..ကျုပ်တစ်ပိုင်းတစ်စ ကျန်နေတဲ့ ခရီးသွားဆောင်းပါလေး
၂၊ ၅၊ ၂၀၁၄
ကမ်းသာယာဟိုတယ်ကြီးကတော့ စပြီးတည်ထောင်ပြီး နှစ်ဘယ်လောက်မှ မကြာဘူး ပျက်စီးသွားတာပဲ။
သူများတွေတော့ ဘာကိုသဘောကျလို့ ကမ်းခြေသွားကြတယ် မသိဘူး။
ကျမကတော့ အစားကို သဘောအကျဆုံးပဲ။
ခရုကပ်နေတဲ့ ကျောက်ဆောင်ပုံကြည့်ပြီး အသဲယားလိုက်တာ။
ချောင်းသာကမ်းခြေမှာတော့ ခရုတောင် မမြင်ရတော့ဘူး။
ရေဘ၀ဲနဲ့တူတဲ့ အပင်က ထူးဆန်းတယ်။ တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။
ဟုတ်တယ် အန်တီမမ ရေ..ကန်းသာယာကို ဧည့်မလာလို့ မပြုပြင်တော့တာ နေမှာ…
ဆိုးတာက လျှပ်စစ်မီးမရှိတာပဲ…ရေနံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေ ရခိုင်မှာထွက်ရက်နဲ့
ဒေသမဖွံ့ဖြိုးတာ ရခိုင်တွေ စိတ်တိုစရာပေါ့ဗျာ…. :harr:
ဟုတ်​တယ်​ မမ။ ပုစွန်​တုတ်​ကြီးချက်​နဲ့ ငါးဟင်းစားချင်​လိုက်​တာ။ :-(
ကမ်း​ခြေမှာ လတ်​လတ်​ဆတ်​ဆတ်​ ပင်​လယ်​စာ ​တွေ အစားချင်​ဆုံး။ ​ရေကူးရတာ ရယ်​ စက်​ဘီးစီးတာ က ဒုတိယ။
ကိုရင်မောင်ရေ…အဲဖက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက် မြို့ကလူတွေ လာလာဝယ်ကြတာ
တော်တော်တောင် များနေပီဗျ…အရင်က တစ်ဧက သိန်းဆယ်ဂဏန်းကနေ..
အခုရာဂဏန်းဖြစ်နေပြီ…ကျုပ်မိတ်ဆွေခြံက ပေ ၈၀x ၁၀၀ လောက်ကျယ်တယ်…
သိန်းနှစ်ရာနဲ့ဝယ်လိုက်တာ…နောက်ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးလာရင် အဖိုးတန်ပီပေါ့…
ပုဇွန်​ထုပ်​ကြီး ဟင်း က ရှယ်ဘဲ ။
ကျနော်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်းကလေးရဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကြီးကို လွမ်းလိုက်တာ
ပြီးတော့ ပင်လယ်စာလည်း ပိုကောင်းတယ်နော်။
လွမ်းလိုက်တာကွယ်. . .
နာ့ အကိုဂျီးမိုက်ကလည်း ချော
ပုစွန်တွေ ငါးတွေကလည်း လတ်ဆတ်
ကေဇီရေ…လူတွေအထိတ် တလန့်ဖြစ်မစိုးလို့ လူပုံမှုံဝါးဝါးရွေးတင်ထာတာ
အစာကောင်းလေးတွေစားရရင်တော့ ကေဇီ့ ကိုသတိရမိပါရဲ့ဗျာ….. :s:
Foreign Resident says: ပုဇွန်​ထုပ်​ကြီး ဟင်း က ရှယ်ဘဲ ။
alinsett (gazette) says:ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွေက
သဘာဝကျကျ လှပတယ်။ ပြီးတော့ ပင်လယ်စာလည်း ပိုကောင်းတယ်နော်။
ဟုတ်တယ် အလက်ဆင်းရေ…ပင်လယ်က သက်တမ်းရင့်ပင်လယ်…
ကမ်းသာယာဆို တကယ့် သဘာဝအတိုင်းပဲရှိသေးတယ်…ကိုယ်တော့သဘောကျသကွာ..
ဖွင့်ဖွင့်ချင်းနှစ်က တစ်ခါရောက်ဖူးတယ် .. ဟိုတယ်ကြီးကောင်းနေတုန်းကပေါ့ ..
ပိတ်တော့မယ်လို့ သတင်းကြားတဲ့နှစ်မှာ တစ်ခါရောက်ဖူးတယ် … ဟိုတယ်ကြီး စုတ်ပြတ်သတ်နေပြီ ..
ချောင်းသာနဲ့ ငွေဆောင်ကမ်းခြေဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်း ကမ်းသာယာကမ်းခြေ ခရီးသွားနဲသွားပြီး အခုလို ပိတ်လိုက်ရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတယ်။ လမ်းခရီးကောင်းရင် ပြန်ပြီး အသက်ဝင်လာအုန်းမှာပါ ..
အဟိ .. ဖောက်သည်ချလိုက်ဦးမယ် ..
သတင်း(1) က …. နိုင်ငံခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ က ကမ်းသာယာကို survey လုပ်ကြည့်တော့ ရေ က ပူနွေးတဲ့ အတွက် အကောင်ပလောင်ကြီးများ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အပူချိန် ဖြစ်နေခြင်း ။ သဲ ကလည်း လူကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ အကောင်တွေ ကြိုက်တဲ့ သဲဖြစ်လို့ နေထိုင်ကြလို့ ဖွိ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း အတွက် မသင့်လျော်လို့ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြောင်း ။
သတင်း(၂) ကတော့ အခု စစ်တပ်က အဲ့ဒီ့မြေတွေကို ပိုင်ရှင်တွေလက်ပြန်အပ်မယ်လို့ ဆိုကြောင်းပါ ။ အဲ့ဒီမှာ နာယက ကြီး ဦးခင်ရွှေ ဦးစီးလို့ ပြည်သူတွေဆီက ပြန်ဝယ်ပြီး develop လုပ်မယ်ဆိုပြီးခရီးသွား အဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲ ခေါ်ယူကြောင်း နဲ့ အဲ့ဒီ့ပါတ်ဝန်းကျင် ဈေးများတက်သွားကြောင်း ပါ ။
ဟုတ်မယ် ကထူးဆန်းရေ…ရေကတော့ ခပ်နွေးနွေးဗျ….
သဲကလည်း အခြားကမ်းခြေတွေနဲ့မတူ…အမှုံကြီးပီး ရောင်စုံရောနေတယ်…
သဘာဝမပျက်သေးပဲလှနေတော့ တကယ့်ကို သဘာဝကျကျလှနေတာပဲ အူးမိုက်ရေ။ ခရုကပ်နေတဲ့ကျောက်ဆောင်ကတော့ အူယားလို့မြန်မြန်ကျော်လိုက်ရတယ်။ ကမ်းသာယာက ဘာ့ကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲမသိဘူးနော်။ အရင်တုန်းကအတော်လေးစည်ပင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါ လျှက်နဲ့။ ရေချိုရှားလို့ဆိုဟုတ်လားအူးမိုက်
အ တော်လေး ကို ပျော် ခဲ့ ပုံ ဘဲ ဗျို့
ဓါတ်ပုံတွေ လှတယ်..လှေပုံလေးတွေ သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်…
ရေဆေးပန်းချီဆွဲရင် ကောင်းမယ်ထင်လို့ …ဆွဲဖြစ်ရင် ထပ်ပြောပ်ါမယ်..။
ရခိုင်မှာတော့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွေ လှသလို အဲဒီ ပင်လယ်နဲ့ အသက်မွေးတဲ့ တံငါရွာလေးတွေက ခင်စရာ ကောင်းပါတယ်..
သူတို့ မှာ ဘာအရောင်မှ မဆိုးခံရဘူးဆိုရင်တော့ ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းက ခင်မင်လို့ညီအကို ဖွဲ့ ပြီးရင် သေစရာရှိရင်တောင်
ရှေ့ က အသေခံမယ့်စိတ်ရင်းတွေပါ..။
ရွာခံတွေကလည်းအမှန် ခင်စရာ ကောင်းပါတယ်..
ဘီကီနီ နဲ့ ကောင်မလေးတွေ မပါတော့
ကမ်းခြေရဲ့ အလှက မပြည့်စုံဘူး ဖြစ်သွားတယ်…။
ပါတာပေါ့ ကျောင်းဒကာရယ်…ခီများတို့လို ဖွတတ်တဲ့လူဒွေကြောက်လို့ ဖွက်ထားတာဗျ
ငါ တစ်ယောက်တည်းပါပေါ့ ….
ဒါ့ပုံရိုက်တဲ့ လူလည်း ရှိသေးတာပဲ …